eReaders and ebooks: Ny momba ny famakiana nomerika sy ny mpamaky elektronika | Ireo mpamaky rehetra
Mpamaky: mpamaky elektronika
Iray isika tranonkala manokana amin'ny mpamaky ereader sy ny famakiana nomerika. Izahay dia mamakafaka sy mizaha ny maodely rehetra misy eny an-tsena ary lazainay aminao ny momba ny tanjany sy ny fahalemeny.
Ny mpamaky tsara indrindra?
Ny fanontaniana mahazatra. Raha te-hanitsy ny heviny ianao dia mamporisika ny 2.
Vaovaon'ny bilaogy farany
Raha te-ho vaovao ianao, dia izao no vaovao farany navoakanay, izany dia ny vaovao farany avy amin'ny marika eo amin'ny tsena sy ny tontolon'ny famoahana nomerika sy famakiana amin'ny endrika elektronika.
Kindle Paperwhite (2021) - Famerenana
SPC Dickens Light Pro - Alternative mora vidy tsara [Fandinihana]
Kobo Sage, filokana miaraka amin'ny audiobooks sy stylus [Analysis]
Hevitra momba ny fitaovana rehetra
Izahay dia mizaha toetra ary mamakafaka tsara ny mpamaky e tsirairay izahay, mandritra ny herinandro maro, hilazana aminao ny tena fiainana ny fampiasana ny fitaovana tsirairay.
Ny tanjonay matanjaka dia ny fanandramana olona maro ka azonay atao ny mampitaha azy ireo ary milaza aminao ny tanjaka sy ny fahalemen'ny tsirairay raha ampitahaina amin'ny fifaninanana ananany.
Amazon Kindle, orinasa, mpamaky, Hardware
Izay rehetra momba an'i Amazon sy ny Kindle-nao
Tsy azo iadian-kevitra izany Ny Kindle no fitaovana fampiasan'ny mpamaky ankehitriny. Avelanay ho anao izao Kindle manokana, miaraka amin'ny fampianarana sy tetika maro mba hahafahanao mahazo tombony betsaka amin'ny ebook Amazon anao.
Ahoana ny fanavaozana ny tanana Kindle antsika
Tutorial: misintona boky ho an'ny fampiharana Kindle ho an'ny fitaovana finday sy ny takelaka
Raha mitady hividy mpamaky iray ianao, ny fampahalalana manaraka miaraka amin'ny fampitahana ny ereaders hanampy anao izany
Fitaovana atoro anao
Ny mpamaky tsara indrindra amin'ny kalitao - vidiny
Raha miresaka momba ny sandam-bola isika dia manohy manolotra ny Kindle Paperwhite ho mpamaky tsara indrindra
Raha te-hijery ireo modely mahaliana indrindra eny an-tsena ianao izao, dia jereo ireo izay atolotray
Fampitahana ireo mpamaky eReaders tsara indrindra
Kindle Paperwhite 6" 300dpi Eny Eny 4Gb / No. 129.99 €
Kobo Aura H2O 6'8 " 300dpi Eny Eny 4Gb / Eny 201 €
SonyPRS-T3 habe 300dpi No Eny 2Gb / Eny 222 €
afo 4 6" 166dpi No Eny 4GbNo 79.99 €
Kobo Aura One habe 300dpi Eny Eny 8Gb / Eny 227 €
Bq Cervantes 3 6" 300dpi Eny Eny 8Gb / eny 139.90 €
Voyage Kindle 6" 300dpi Eny Eny 4Gb / No. 189.99 €
Kindle Oasis 6" 300dpi Eny Eny 4Gb / No. 289.99 €
Inona no zava-dehibe ao amin'ny ereader / ebook
Nandeha ny taona ary ny mpamaky dia manamafy sy mihombo hatrany ny fitaovana. Ny toetra izay nojerentsika taona maro lasa izay hanovana izay mpamaky e-novidiany no niova. Ka ankehitriny ny jiro dia saika adidy iray, raha taona vitsivitsy lasa izay dia tsy noeritreretinay izany.
Ka inona no tokony hotadiavintsika amin'ny taona 2019 raha te hividy na hisafidy mpamaky iray isika?
Toy ny amin'ny zava-drehetra dia tsy maintsy ataontsika ao an-tsaina ny tanjona tiana omena azy.
Haben'ny efijery sy ny vahaolana
Ny haben'ny efijery an'ny mpamaky mahazatra dia efa 6 always ary ny ankamaroan'ny maodely amin'izao fotoana izao dia mitohy amin'io habeny io. Saingy misy maro ireo mpamaky vaovao lehibe, misy efijery 8 sy 10 ″.
Ny mpamaky 6 ″ dia mora tanterahina ary mora entina kokoa. tsy milanja firy izy rehefa mitazona azy isika. Fa ny iray ″ raha tsy mitondra dia manome antsika traikefa nahafinaritra tokoa.
Raha ny momba ny vahaolana amin'izao fotoana izao dia miasa miaraka amin'ny 300 dpi (piksela isaky ny santimetatra) ny mpamaky mandroso indrindra ary ireo hafa izay manana 166 dpi. Amin'ity tranga ity dia vao mainka tsara kokoa noho isika hahazo famaritana tsara kokoa
Io no fiasa na fampiasa farany izay nampiana amin'ny mpamaky e-mpamaky. Izy io dia afaka manisy tsy fitoviana amin'ny fividiananao. Ny jiro tsy dia tsara dia hamorona aloka ary hanome anao traikefa ratsy amin'ny famakiana.
Ireo mpamaky maivana miaraka amin'ny hazavana dia mijanona eto, efa ela izy ireo no tonga, fa ankehitriny dia misy ebook fototra mampiditra azy io. Ny marika lehibe dia nametraka azy io ary ny kely hifaninana dia tsy nanan-tsafidy afa-tsy ny mampiditra azy amin'ny maodely rehetra.
Ny jiro dia iray amin'ireo zavatra mahatonga ny fiainana bateria ereader ho fohy.
Eo amin'ny sehatry ny rafitra fiasa dia miavaka amin'ny vondrona 2 izy ireo, ireo izay manana rindrambaiko manokana sy ireo izay mampiasa Android, izay iray amin'ireo fivoarana farany ampidirin'ny marika maro.
Hatramin'izao, ny mpamaky tsirairay dia niara-niasa tamina rindrambaiko manokana, ny Kindle sy Kobo somary voalamina sy sariaka ary tena mahay. Saingy efa elaela ary indrindra amin'ny marika tsy dia fantatra loatra dia nanomboka nampiasa Android izy ireo izay mamela azy ireo (raha mihazakazaka tsara izy ireo) hahatratra ireo marika lehibe amin'ity lafiny ity.
Ny tombony azo amin'ny Android amin'ny mpamaky iray dia maromaro:
Azontsika atao ny mametraka rindranasa marobe izay mampitombo ny fiasa sy ny fahafahan'ny mpamaky. Mamaky sy mamaky azy avy eo fampiharana toy ny Getpocket, Instapaper, sns. Azontsika atao aza ny mametraka ny rindranasa Kindle sy Kobo ary miditra amin'ny kaontinay amin'ireo sehatra ireo.
Ny tokony hitandremantsika dia ny fahaiza-miteny. Andorid amin'ny ereader tsy manana herinaratra kely dia mankao amin'ny olona izy ireo ary mamorona traikefa tsy mahafinaritra.
Fa ny hoavin'ny marika maro dia hiaraka amin'ny Android hahafahany mifaninana amin'ireo lehibe.
Ny marika lehibe indrindra rehefa miresaka momba ny mpamaky mpamaky izy ireo, ireo izay manasongadina ny kalitaony sy ny tontolo iainana Amazon Kindle y kobo nataon'i Rakuten.
Avy eo dia misy maro hafa, Nook, Tagus, Tolino, BQ, Sony, Likebook, Onyx. Manana fizarana manokana ho an'ny tsirairay amin'izy ireo izahay ary tianay ianao hahita izay azon'izy ireo atolotra anao.